Ny hoavin'ny fitsangatsanganana | Save A Train
Home > Travel Europe > Ny hoavin'ny fitsangatsanganana
Fitaovam-pitaterana, amin'ny endriny rehetra, no ivon'ny firenena sy ny toekareny. Nandalo fotsiny ireo lalana, rail, ary ny rivotra izay nahafahantsika nampifandray an'izao tontolo izao tamin'ny fomba izay lasa kely kokoa noho izy io. Noho izany, rehefa mijery ireo indostria lehibe maneran-tany isika, ny fitaterana dia iray amin'ireo mavitrika indrindra, miova tsy tapaka hanatsara ny hoavintsika.
Ny fironana vao haingana teo amin'ny sehatry ny dia sy ny fitaterana dia natao tamin'ny famoronana safidy maitso. Hetsika tena ilaina hanavotana ny tontolo iainantsika, Ny fampivoarana vaovao amin'ny fitaterana dia efa miasa amin'ity fitsipika ity. Na izany aza, ireo fandrosoana ireo dia manitsakitsaka ny fetin'ny fomba fitetezantsika ny taonjato lasa. Ary amin'ny fanatanterahana izany, Izy ireo dia mitarika antsika ho amin'ny hoavy fitsangatsanganana izay ho haingana kokoa, azo antoka kokoa, sy ara-bakiteny ivelan'izao tontolo izao.
Ny hoavin'ny fitsangatsanganana: Fizahan-tany eny amin'ny habaka
Ny habaka dia toerana voalohany indrindra an'ny olombelona nandritra ny fotoana lava indrindra. Na izany aza, satria nandeha tamin'ny tongotra tamin'ny volana am-polony taona maro lasa isika, tsy nisy na inona na inona ho fanintona ny saim-bahoaka. Na izany aza, misy hazakazaka mitohy hampiasana ny olona amin'ny habakabaka, ho an'ny fialam-boly. Ny fizahan-tany eny amin'ny habaka no zavatra lehibe manaraka, ary na dia mety ho lafo sy ho azy manokana aza izany, dingana lehibe ho an'ny hoavy izany, izay mety hitranga amin'ny lafiny rehetra fanjanahan-tany Mars na manao trano fitobiana mety hipetraka, izay ahafahan'ny olona an-jatony miara-monina. Na izany aza, raha ny mpahay siansa dia mety nanao dingana tamin'ny lalana mety, tokony mila miandry fotoana vitsivitsy isika alohan'ny hahatongavan'ny fivoarana hita maso.
Indostrian'ny fitsangatsanganana sy fitaterana: Fiara tsy mitondra fiara
Anontanio amin'olona izay hevitra momba ny fitaterana amin'ny ho avy, ary mihoatra noho izany aza dia mety hilazana fiara tsy misy mpamily. Efa misy lamasinina manerana an'izao tontolo izao izay miasa amin'ity fitsipika ity. Ary, nandritra ny fotoana ela indrindra, Ny mpahay siansa sy ny indostrian'ny indostria dia niara-niasa tamin'ny fametrahana ny lalana ho azo antoka kokoa amin'ny fampidirana ny teknolojia ho isan'andro traikefa mitondra fiara. Ny mahatonga fiara tsy misy mpamily mendrika ny fiandrasana dia ny hanova tanteraka ny indostria amin'ny fomba maro. Avy amin'ny maha bebe kokoa tontolo iainana mankany amin'ny fiarovana amin'ny làlana, afaka handrakotra lavitra lavitra ny olona raha tsy mandehandeha mandritra ny ora maro.
Ny hoavin'ny fitsangatsanganana: lamasinina
Iray amin'ireo tranainy indrindra endrika fitateram-bahoaka manodidina, Ireo fiaran-dalamby dia mbola manana toerana mazava amin'ny hoavintsika. mahagaga, angamba mihoatra ny taloha. Na dia noforonina aza ireo teknolojia vaovao hahatonga ny rafi-pitaterana tsy misy atahorana, Haingankaingana, ary mety kokoa, ny filana fototra an'ity rafitra ity dia hitombo araka ny tokony ho izy. Ny fiaran-dalamby dia efa zavatra mitovy amin'ny fampitoviana ara-tsosialy satria ny mpanankarena matetika dia mitaingina amin'ny mahantra indrindra amin'ny sarangan'ny mpiasa fa noho ny fiakaran'ny haingana ny mponina eran'izao tontolo izao., indrindra any amin'ireo firenena indostrialy, Ny rafitra fiaran-dalamby mandaitra ary mahomby dia manandanja amin'ny fihenan'ny lozam-pifamoivoizana. Ity ihany koa dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny tontolo iainana satria ny fiaran-dalamby dia afaka hihazakazaka am-pahombiazana amin'ny angovo madio ary mandritra izany fotoana izany dia mitondra fiara mahery vaika maro be eny an-dàlana ary mampihena ny famoahana CO2 tany.
Tapakila Berlin sy Zurich
Tapakila Basel to Zurich
Tapakila ho an'i Zurich
Ny Hyperloop dia voalaza fa "fomba fitaterana vaovao voalohany 100 taona. " Izy io dia mandehandeha amin'ny hafainganam-pandeha mahery vaika ao anaty fantsona iray, mampifandray ny haleha amin'ny toerana iray. Ny Hyperloop dia mety hampiasaina amin'ny fitaterana entana samy hafa. Na izany aza, na dia ny Elig Musk enigmatika aza no lohalaharana amin'ity teknolojia ity, ny firenena sasany tsy misalasala momba an'i Hyperloop ary raha tena mahazo vola amin'ny resaka vola. Na dia izany aza, Ny fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ity fitaterana vaovao ity dia akaiky ny zava-misy noho ny nantenaintsika, miaraka amin'ny fitsapana sy fananganana fantsona efa mitohy any Kalifornia ary mety ho any Eoropa tsy ho ela.
Tapakila Hamburg any Copenhague
Tapakila Rotterdam mankany Hamburg
Ity iray ity dia natao manokana ho an'ny mpandeha seza misy seza, izay mankafy mitsidika toerana vaovao nefa aleony manao izany avy amin'ny fampiononana ny tranony. Raha ny VR dia efa lasa varotra, tsy ho ela, dia hahita fampifangaroana eo amin'ny VR, IR, sy AR, mitarika traikefa izay akaiky amin'ny tena fiainana araka izay azo atao. Avy amin'ny fitsidihana ireo zava-mahagaga fito eto amin'izao tontolo izao mba hisitrana ao amin'ny Haran-dranomasina Lehibe, ity teknolojia vaovao ity dia hanampy ny olona hahita an'izao tontolo izao tahaka ny taloha.
Ho faly izahay hanampy anao hahita ireo safidy tsara indrindra azon'ny tapakila azo alaina. Alefaso ny tapakilan'ny lamasininao Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Ny hoavin'ny fitsangatsanganana” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffuture-of-travel%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary afaka manolo ny pl amin'ny fr na nl sy fiteny maro voafidinao.